ဒါလေးကတော့ xp ပရိတ်သတ်များ အတွက် လှလှပပလေး ဖြစ်သွားအောင် နှင့် မိမိ လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အဆိုပါ Calendar ထဲမှာ မှတ်ထားလို့ ရပါတယ် . မွေးနေ့ဆိုလဲ မွေးနေ့ပေါ့ . မနက်ဖြန် ဘယ်အချိန်မှာ ဘာအလုပ် လုပ်စရာရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့မှာ ရေးထားလိုက် မနက်ဖြန်ကျရင် အဲ့ဒီ့မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်စရာ တွေက ပေါ်နေလိမ့်မယ် . Feature တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ . အသုံပြုချင် သူများအတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ် .
ဘာ Application များ ပါသလဲ ဆိုရင်တော့ ..Adobe ReaderAazanFlash PlayerFLV PlayerMundu RadioIM+ v4.30Shutdown SoftwareFlash LiteiMate Suite PPCMedia Ham Mobile.Net Framework 2.0NimbuzOperaPocket TVReal PlayerVNC ViewerWindows Mobiel Storage ManagerReal PlayerYoutube DownloadYoutube PlayerVoice TwisterSmart MovieEnglish Oxford DictionaryEnglish SynonymsPocket QuakeSompy PlayerWindows Media Player SkinstGPSAirscanner Mobile AntivirusButton maxMegasoft POcket ClockMIRCOpera 8.65PC CillinPocket Music PlayerSmart Movie 3.31SoftMem MaidSpeed Boostertcp Music PlayerVito Voice Dialer.......and Many Moreလိုချင်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း အောက်မှာ Download လိုက်ပါ . မနည်းကို တင်လိုက်ရတယ် . Read More
flash drive ကို format ချမရရင်ဖြင့်
ညီငယ်တစ်ယောက် မေးထားတာလေးပါ . ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် . ဒါကတော့ မိမိတို့ flash drive များကို format ချမရတဲ့ အခါမျိုးမှာ အခုတင်ပေးတဲ့ hp usb disk storage format tool ကို သုံးပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . အသုံးပြုနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် . software ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ မိမိ format ချမရတဲ့ storage device ရဲ့ Port ကို ရွေးပြီး type မှာ NTSC ကို ရွေးပြီးတော့ start ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ . လွယ်ပါတယ် . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .(မှတ်ချက်။ ။pc တစ်လုံးတွင် format ချမရပါက တစ်ခြား pc တွင် အဆိုပါ program ကို install လုပ်ပြီး တစ်ခြား pc ဖြင့် format ချကြည့်ပါ .)
USB STORAGE DEVICE ခေါ် flash drive များကို ဘယ်လိုပိတ် ထားနိုင်မလဲ .
flash drive ကို ဘယ်လို ပိတ်ရမလဲ အစ်ကိုလို့ မေးထားတဲ့ ညီငယ်တစ်ယောက် အတွက် ပြန်ဖြေပေးလိုက်တာပါ .ကျွန်တော်တို့ ပိတ်မယ့် usb port မှာ နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း မှတ်ထားပေးပါ . usb port မှန်သမျှကို ပိတ်လို့ရတဲ့ နည်းလဲရှိပါတယ် . အခု ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ့နည်းကို မသုံးချင်ဘူး . virus ၀င်မှာစိုးလို့ flash drive တွေကိုပဲ ပိတ်ထားမယ် . Printer, Scanner, webcom, စတဲ့ port တွေကိုတော့ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားမယ် . ပိတ်မှာက storage device တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပိတ်မယ် . storage device မှာ flah drive တင်မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြား external storage device တွေဖြစ်တဲ့ MP3 (or) MP4 Player, ipot, iphone, external HDD , Digital Camera စတာတွေကိုလဲ ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . program မလိုဘဲ လတ်တလော menual နည်း နဲ့ လုပ်ကြည့်ကြရ အောင်ပါ .လုပ်နည်းStart >> Run ကို ခေါ်ပါ .regedit ကိုရိုက်ထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ .Registry Editor Box ပေါ်လာရင် အောက်က အတိုင်း သွားလိုက်ပါ . အောက်မှာပုံ(၁) နှင့် (၂) မှာ ပြထားပေးပါတယ် . မရှင်းရင် ပုံတွေကို ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ပုံကြီးပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ် HKEY LOCAL MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Services >> USBSTOR ကို သွားပြီး ပုံနှစ်ထဲကအတိုင်း2ချက်နှိပ်လိုက်ပါ . box တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .အဲ့ဒီ့ Box မှာ ပေါ်နေတဲ့ နံပါတ်ကို "3" ကနေ "4" ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ .အဲ့ဒါဆိုရင် usb storage device များကို ပိတ်ထားပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ . သူ့ကို အသုံးပြုခွင့် ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် "4" ကနေ "3" ကို ပြန်ပြောင်း ပေးလိုက်ပါ .
HotFile Auto Downloader v1.0
ဒါကတော့ hotfile link တွေကို premium account နည်းတူ စောင့်စရာ မလိုဘဲနှင့် Download လုပ်ပေးမည့် hotfile Downloader ပါ . အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အရင်ကလဲ premium account နည်းတူ Download လုပ်နည်းကို ဒီမှာ ရေးခဲ့ ပြီးပါပြီ . ဒီလို Downloader များဟာ hotfile downloader ဟာ hotfile download link များကို Download လုပ်ဖို့အတွက် ဖြစ်သလို rapidshare downloader ဟာလဲ rapidshare download link များကို Download လုပ်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ special tool များဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခြား Download link များကို Download လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံရတတ်ပါတယ် . အဲ့ဒါကြောင့် တစ်ခြား link များကို Download လုပ်ဖို့အတွက် ကတော့ orbit downloader, download manager စတဲ့ Downloader များဖြင့် Download လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် . အခုတင်ပေးတဲ့ Downloader ဟာ hotfile link များအတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ် . အဆင်ပြေကြပါစေ .
ညီနေမင်းgraphic icons, Photoshop Frames
ချစ်သူများနေ့ အတွက် ထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . valentime's day အတွက် အမှတ်တရလေးတွေ ဖြစ်သွားအောင် ပေးချင်သူများ အတွက် လှလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . တစ်ဖိုင်တည်းကို တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Download လုပ်သူများ Downloader တစ်ခုခုဖြင့် ခံပြီးတော့မှ Download လုပ်စေချင်ပါတယ် . Read More
2009 ခုနှစ်ထုတ် computer journal များ
ဒါကတော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့မှ ကိုကျော်မြင့်ဦး ဆိုက်ကနေ ရလာတဲ့ ကွန်ပျူတာ 2009 ဂျာနယ်တွေပါ . မြန်မာပြည် ကနေ ၀ယ်မဖတ်နိုင် သူများ နှင့် နိုင်ငံခြားရောက် ညီအစ်ကိုများ အတွက် အဆင်ပြေအောင် တစ်ခါတည်း တင်ပေး လိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေသာ Download လုပ်လိုက်ပါ . အဆင်မပြေရင် ပြောလို့ရပါတယ် .
2009 ဇန်န၀ါရီလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 မတ်လထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 ဧပြီလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 မေလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 ဇွန်လထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 ဇူလိုင်လထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 သြဂုတ်လထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 စက်တင်ဘာလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 အောက်တိုဘာလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 နိုဝင်ဘာလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
2009 ဒီဇင်ဘာလထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် >> Download
ညီနေမင်းAnswers, Phone ဖုန်းနှင့်ဆိုင်သမျှ
ဘာ့ကြောင့် ဟန်းဖုန်းမှာ memory card error ပေါ်သလဲ
မဖြူဖြူအောင် : ကျွန်မဟန်းစက်က လည်းကွန်ပျူတာနဲ. joinတဲ့ကြိုး မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖုန်းက memory cardကိုထုတ်ပြီး card reader နဲ.ပဲသီချင်းတွေကို လိုသလို ထည့်ပါတယ်။ နေ.တိုင်းလိုလို ကျွန်မနားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းကိုထည့်ဖို. memory cardကို ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ. ထုတ်လိုက် ထည့်လိုက်လုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟမ်းစက်ကအရင်ကဆို camera ပါရိုက် လို.ရပါတယ်။ အခု system error ဆိုတာပေါ်ပေါ် နေပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်လို. မရတော့ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ရိုက်ရင်လည်း memory ပြည့်နေလို. အခြားဖိုင်တွေ ဖျက်ပါလို.ပဲ ပေါ်ပေါ် လာပါတယ်။ ဒါနဲ. ကျွန်မလည်း ရှိသမျှဖိုင်တွေကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ အဲလိုဖျက်လည်း အခြားဖိုင်တွေ ဖျက်ပါလို.ပဲ ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါဘာဖြစ်လို.လဲ ဆိုတာ ကျွန်မသိချင်လို.ပါ။ ကျွန်မကို ပြောပြပေးပါနော်. ... memory card က ဘာဖြစ်လို.လဲ မသိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပါ။အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ကို မေးလ်ကနေ ပို့ပြီး မေးလာတဲ့ မဖြူဖြူအောင်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ . ကျွန်တော် မေးလ်ပြန်ပို့ပြီးတော့ မဖြေပေးတော့ပါဘူး . ဒီမှာပဲ ပို့စ်တင်ပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် . ကျွန်တော်တို့ ဟန်းဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အချက်ကလေးကို ထောက်ပြရင်းနဲ့ ပို့စ်တင်လိုက်တာပါ . ဟန်းဖုန်းတွေကို သုံးတဲ့အခါမှာ memory မှာ external memory နဲ့ internal memory ဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် . external ကတော့ card လေးတွေပေါ့ . internal memory ကတော့ ဟန်းဖုန်း ၀ယ်တုန်းက သူ့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာကို ပါတဲ မူရင်း memory ပါ . bluetooth နဲ့ပဲ ပို့ပို့၊ ကင်မရာပဲ ရိုက်ရိုက် မူလအစပထမမှာ phone memory ထဲကို သွားသွားသိမ်းနေ ပါတယ် . အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ card card memory ထဲကို ပြန်ပြီးတော့ ပြောင်းထည့်ပေးရပါတယ် . အခုပေါ်နေတဲ့ error များဟာ phone ရဲ့ မူရင်း memory card ထဲမှာ ဖိုင်ပြည့်နေလို့ ပေါ်တဲ့ error ပါ . ကျွန်တော်တို့က ဖုန်း memory card ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ သီချင်းတွေ နှင့် အခြားဖိုင်တွေကို card ထဲကို move လုပ်ပေးပါ . မဟုတ်ရင်လဲ ဖျက်ပစ်ပါ . bluetooth နဲ့ ပို့တဲ့အခါတွေမှာ memory card (external memory) ထဲကို တစ်ခါတည်း မရောက်ပါဘူး . ဖုန်း memory ထဲကို အရင်ရောက်ပြီးမှ card ထဲကို ပြန်ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ပါ . အဲ့ဒါဆိုရင် ဖိုင်တွေ ထပ်ထည့်တာတို့၊ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တာတို့ ကို ပြန်ပြီး လုပ်လို့ ရသွားပါလိမ့်မယ် .
Recover images, audio/video, MP3/MP4 files from cellular phones, MP3 players, PDAs. Download mediafire
လိုချင်သူများ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . Photoshop brush ကို လေးတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်သွားအောင် လို့ တစ်ခါတည်း တင်ပေး လိုက်တာပါ . ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို စုစည်းပေးပါဦးမယ် . Read More
ဒါကတော့ ရေတံခွန်ပုံ brush တွေပါ . လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ကိုင်ထည့် လိုက်ပါ . ရှု့ခင်းဒီဇိုင်း ဆွဲတဲ့ ဒီဇိုင်းနာ တွေအတွက်တော့ ဒါလေးတွေက လိုအပ်ပါတယ် .
Autocad သများများတော့ သိမှာပါ . 3D ဒီဇိုင်းပုံစံ photoshop brush လေးတွေပါ . အတော်လေး လှပါတယ် . ဘာရယ် ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး . လိုအပ်တယ် ထင်ရင်တော့ ကိုင်ထည့်လိုက် . အောက်မှာ တင်ပေးထားတယ် . Read More
ဒါကတော့ ရှု့ခင်းတို့ သစ်တောပုံစံလေးတို့ အတွက် လုပ်ထားတဲ့ brush ပါ အတော်လေးကို လှပါတယ် . ပန်းချီခံစား တတ်တဲ့သူတွေ ကတော့ အတော်လေး ကောင်းတယ်ပြောတာပဲ . ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ပြီးတော့ အဲ့လိုမျိုး ပန်းချီဆန်ဆန် မတွေ မခံစားတတ်ဘူး . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် .Download Beyond the Mist
ဒါကတော့ Photoshop tree brush ပါ . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . Download Tree Brush
Photoshop Brush လေးပါ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . အောက်မှာ လင့်အသစ်နှင့် တင်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ လင့်သာ Download လုပ်ယူကြပါ . Download up4vn
ကဲ ဒီနေ့တော့ link အသစ်ကလေးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် . အဲ့ဒီ့ Link လေးထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနှင့် အဆင်ပြေတဲ့ Rapidshare ၊ Megaupload ၊ Deposite files ၊ Mediafire ၊ ifile.it ၊ hotfile တစ်ခါတည်း ပါထားပြီးသားပါ . အဆင်ပြေတဲ့ link နဲ့သာ Download လုပ်လိုက်ကြဗျာ .Download Dragon Brush
Realtek High Definition Audio Driver R 2.41
အသံမလာတဲ့ ညီအစ်ကိုများရဲ့ pc ကို အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ realtek high definition audio driver ကိုသာတင်လိုက် မရတဲ့အသံ ထွက်လာလိမ့်မယ် .Download Driver for Windows 2000, Windows XP/2003 (32/64 bits)Download Driver for Windows 7/ Vista (32/64 bits)
NVIDIA Forceware 195.62 WHQL Xp 32(This software requires Windows 2000, Windows XP, or Windows 2003 Server.)Download Direct linkNVIDIA Forceware 195.62 WHQL XP 64(This software requires XP 64. 108.Mp)Download Direct linkNVIDIA Forceware 195.62 WHQL Vista 32his software requires Windows VistDownload Direct linkNVIDIA Forceware 195.62 WHQL Vista 64(This software requires 64-bit Windows Vista.)Download Direct link
Desinger တိုင်း လိုချင်ကြတဲ့ Vector Stars and Bubbles Brushes များ
.ကျွန်တော် ရှာနေတာ ကြာပါပြီ ရှာလို့ မတွေ့နိုင်ဘူး ဒီနေ့ညမှ ရှာရင်းနဲ့ ကံကောင်းတော့ သွားတွေ့တယ် . တွေ့တွေ့ချင်း ၀မ်းသာသွားတယ် . ချက်ချင်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Download ifile.it | Download mediafire | Downld multiupload
သစ်သီး ပုံ ဒီဇိုင်းများ
သစ်သီးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒီဇိုင်းများ၊ ပိုစတာများ လုပ်ချင်သူများ အတွက် google ကနေ ရှာစရာမလိုအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဒီနေ့ menu စာအုပ် လုပ်ဖို့ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ တွေ့တဲ့ ဟာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .Download hotfile | Download uploading | Download rapidshare | Download mediafire | Download extabit
ဒါကတော့ အခုနောက်ပိုင်း လူသုံးများလာတဲ့ ဖိုင်ခွဲတဲ့ program တစ်ခုပါ . win rar တို့ win zip တို့နဲ့ ဖိုင်ခွဲလို့ရတာပဲ . ပြန်ဆက်လို့ ရတာပဲလို့ အတွန့်တက်လာ နိုင်ပါတယ် . ဘာ့ကြောင့် သူ့ကိုမှ သုံးရတာလဲဆိုရင် win rar တို့ win zip တို့နဲ့ ဖိုင်အကြီးကြီး (ဥပမာ DVD တစ်ချပ်ကို) 50 MB စီရှိတဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ပြန်ခွဲထုတ် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ hjsplit နဲ့မှ မဟုတ်ရင် file ပြန်ပြီး ဖြည်တဲ့အချိန်ကျရင် error တွေ တက်တတ်ပါတယ် . Download လုပ်တုန်းက လုပ်ပြီးခါမှ error တက်နေရင် ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့ မဟုတ်ဘူးလား . အခု ဒီကောင်လေးက ဘာ error မှ မဖြစ်ဘဲနှင့် အကောင်းဆုံး ခွဲ/ဆက် အလုပ်ကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် . သူ့ကို Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး . သူ့ကို အသုံးပြုနည်းကို အရင်က ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ . သူနဲ့ ဖိုင်တွေကို ခွဲထုတ်ရင် နောက်ဆုံးက 001, 002,003 အဲ့လိုမျိုး ဆုံးပါတယ် . အဲ့တော့ အကြမ်းဖျင်း သိထားရမှာက .rar နဲ့ဆုံးရင် win rar နဲ့ ဖိုင်ခွဲထားတယ်၊ .zip နဲ့ ဆုံးရင် win zip နဲ့ ဖိုင်ခွဲထားတာ၊ အဲ 001, 002,003 နဲ့ ဆုံးနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို မြင်ရင် ဘာမှမတွေးနဲ့ အဲ့ဒါ hjsplit နဲ့ ဖိုင်ခွဲထားတာ အဲ့တော့ hj split နဲ့ပဲ ပြန်ဆက်လို့ရမယ်လို့ သိလိုက်ရင် အိုကေသွားပါပြီ . Download ifile.it | Download mediafire | Download rapidshare
ဒါကတော့ ကျွန်တော် selection ရွေးထားတဲ့ icon အခု 70 ကျော်ပါ . အရမ်းကြိုက်လို့ သီးသန့် ခွဲထားတာ . အတော်လေးကို လှတယ် . လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ .Download ifile.it | Download mediafire | Download multiupload | Download rapidshare
ဒါကတော့ အရမ်းလှတဲ့ icon လေးတွေ စုပေးထားတာပါ . ဒီဇိုင်းနာများ အတွက် လိုအပ်ပါတယ် . လိုချင်လျှင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . ဘာပုံလေးတွေလဲ သိချင်ရင် အဲ့ဒီ့ပုံကို ကလစ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါလိမ့်မယ် . Download mediafire | Download multiupload
Desinger များအတွက် သစ်သား ဒီဇိုင်းများ
Photoshop Design များအတွက် လိုရမယ်ရ ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် သစ်သားပုံစံ အမျိုးမျိုးကို လိုချင်သူများ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဒီဇိုင်းနာများ အတွက်တော့ ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်တာ မှန်သမျှကတော့ လိုအပ်နေပြီးရင်း လိုအပ်နေဦးမှာပါ . ကဲ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . နောက်ပိုင်းလဲ Photoshop နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို တင်ပေး ပါဦးမည်. Download ifile.it ၊ Download mediafire
ကဲ ဒါလေးကတော့ အတော်လေး ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . ဘာ ကောင်းတာ လဲဆိုရင် တစ်ခြား video converter များလို convert ကိုတင် လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ . movie များကို မလိုချင်တဲ့ အပိုင်းများကို ဖြတ်ပစ်တာတို့ အလင်း အမှောင် ချိန်တာတို့ စတဲ့ effect များကိုပါ ပြုပြင်လို့ ရပါသေးတယ် .AVI, DivX, XviD, MPEG, MPG, MPE, DAT, WMV, ASF, RM, RMVB, OGM, MP4, FLV, 3GP, MKV, VOB ,MOV etc. ၊ High-Definition video ဖိုင်များ (H.264/MPEG-4 AVC, AVCHD Video (*.m2ts, *.mts)၊ Apple TV h.264 720P, MKV, HD WMV, MPEG2/MPEG-4 TS HD Video, etc) များကိုပါ convert လုပ်ပေးပါတယ် . ဒါ့အပြင် DVD format မှတစ်ဆင့် ပေါ်ပျူလာ ဖြစ်နေတဲ့ AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, H.264/MPEG-4 AVC, DivX, XviD, MOV, ASF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VOB စတဲ့ format များကိုလဲ ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် . ကြည့်ကျက်ပြီးသာ ကိုင်လိုက်ကြပါ . လွယ်ပါတယ် . Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါကတော့ Youtube.com ဆိုက်ကနေ တင်ထားတဲ့ movie တွေကို Download လုပ်တဲ့ downloader ပါ . အဆင်ပြေပြေနဲ့ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . real player မရှိသူများ ဒါလေးနှင့် Download လုပ်ယူလို့ရပါတယ် . လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ကွန်ပျူတာကို auto ပိတ်ချင်သူများ အတွက် နောက်ထပ် တစ်ခု တင်ပေးလိုက် ပါတယ် . လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေ ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် . Download mediafire
တစ်ချို့ program တွေ မိမိ pc ကနေ uninstall လုပ်ပေးတဲ့ program တစ်ခုပါပဲ . ကျွန်တော် အရင်က ရှင်းပြထားဖူးပါတယ် . အဲ့ဒါကြောင့် အသေးစိတ် မရှင်းပြတော့ပါဘူး . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .Windows 2000, XP, 2003, Vista and Windows7( 64-bit အပါအ၀င်) အားလုံးကို support လုပ်ပါတယ် . Download ifile.it ၊ Download mediafire
Proxy Pro v7.0.1515
လှလှပပ Animation ပုံလေးတွေ စုပေါင်းစပ်ပေါင်း
လှလှပပ ပုံလေးတွေ ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ် . . အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ဟန်းဖုန်း ထဲကိုလဲ ထည့်ထားလို့ ရပါတယ် . ကျွန်တော် ကတော့ ကြိုက်တယ် . အခုပုံလေး တွေကို အဆင်ပြေမယ် ဆိုရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . Download mediafire
ကဲဒါကတော့ (Jan 20, 2010) က ထုတ်တဲ့ 5.18 build7ပါ . window7ကို support လုပ်ပါတယ် . ဟိုတစ်နေ့က ဘယ်သူလဲမသိဘူး တောင်းထားပါတယ် . ကဲအဆင်ပြေကြပါစေ . လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ပေးထားတဲ့ DL link တွေကို ဘယ်လို Download လုပ်ယူမလဲ
အရင်က ဒါကို မရေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပါ မေးလ်တွေနဲ့ မေးကြ၊ box မှာ လာမေးကြနဲ့မို့ ကျွန်တော် ပို့စ်တင်ပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ Download လုပ်ဖို့ ပေးထားတဲ့ link တွေကို tinpyaste ရဲ့ page ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ် . ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို Google ကနေ ရှာရင် မတွေ့အောင်လို့ပါ . ပြီးတော့ Download လုပ်ရမယ့်လင့်တွေ များနေရင် Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ဆိုပြီး အပိုင်းတွေမခွဲတော့ဘဲ အဲ့ဒီ့ tinypaste ထဲမှာပဲ အားလုံး ပေါင်းပြီးတော့ ထည့်ပေးထားပါတယ် . အခု ကျွန်တော် အောက်ကဖိုင်လေးကို Download လုပ်ပြပါ့မယ် . Download ifile.itအပေါ်က Download ifile.it ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ http://tinypaste.com/468ae ဆိုတဲ့ tinypaste ရဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ရောက်သွားမှာပါ . ကျွန်တော်တို့ တစ်ကယ် Download လုပ်ရမယ့် ifile.it ရဲ့ link ကို အဲ့ဒီ့ ပေါ်လာတဲ့ tinypaste ရဲ့ စာမျက်နှာမှာ သေချာ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ . တွေ့ပါလိမ့်မယ် . အဲ့ဒီ့ ifile.it ၊ rapishare ၊ mediafire ၊ Megaupload ၊ multiupload စတာတွေရဲ့ Download link တွေအားလုံးကို အဲ့ဒီံ tinypaste မှာပဲ ထည့်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . ဘယ်လို Download ဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒီမှာ ရေးထားပြီးသားပါ . Read More
ကဲ ဒါလေးကတော့ rapidshare hosting site က ဖိုင်များကို စောင့်စရာမလိုဘဲနှင့် Download လုပ်လို့ရတဲ့ Downloader ပါ . အထဲမှာ License အတွက်တော့ ပါပြီးသားပါ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Download ifile.it ၊ Download mediafire
ကဲ နောက်ထပ် icons အစု တစ်ခုပါ လိုတဲ့နေရာမှာ သုံးလို့ရအောင်ပါ . ဒီဇိုင်း သမားများ အတွက် icon ကောင်းကောင်းလေး တွေက မရှိမဖြစ် လိုအပ်မှာမို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload ၊ Download 4shared
ကဲ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မိမိ တင်ထားတဲ့ program တွေကို တစ်ခြားသူ မသုံးစေချင် ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ လွယ်လွယ်လေးပါ ဒီကောင်လေး သုံးပြီးတော့ password ပေးပြီး သော့ခတ် ထားလိုက်ပါ password မမှန်သရွေ့ ပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး စိတ်ချ။ လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် . start >> program ကို သွား မိမိတင်ထားတဲ့ program ကို ဥပမာ photoshop ဆိုရင် Photoshop shortcut လေးကို right click ပေးပြီး password protect ပေးလိုက်ပါ . password ပေးတဲ့နေရာမှာ နှစ်ခါ ရိုက်ထည့် ပေးရပါတယ် . အဲ့ဒီ့ နှစ်ခု တူပါစေ . မဟုတ်ရင် အဆင်မပြေပါဘူး . အဲ့လို ရိုက်တဲ့အခါ error ပေါ်လာတတ်ပါတယ် . ဘာမှ စဉ်းစားမနေပါနဲ့ အဲ့လိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ program က ဖွင့်ထားပြီးသား မို့လို့ . သူက သော့ခတ်မရတာ . Task manager (ctrl+alt+delete) ကို ခေါ်လိုက်ပါ . processes ကို ရွေးပြီး အထဲမှာ photoshop.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးပွင့်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ . အဲ့လိုတွေ့တာနဲ့ သူ့ကို click တစ်ချက်နှပ်ပြီး end process ပေးလိုက်ပါ . အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ password ပေးလို့ရသွားပါပြီ . အဆင်မပြေတဲ့သူများအတွက် ဓါတ်ပုံနဲ့ ကျွန်တော် တင်ပေးပါဦးမယ် . အခုတော့ အလုပ်က အရမ်းများနေသေးလို့ ညပိုင်းလောက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ် . ကဲ Download လုပ်ချင်သူများ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ကျွန်တော်တို့ အသဲစွဲ ဖြစ်နေတဲ့ orbit ကနေ (7-Jan-2010) ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ latest version 3.0 ကို နောက်ဆုံး ထုတ်လိုက်ပါပြီ . အရင်ပုံစံနဲ့ ကတော့ တစ်အားကို ကွာခြားသွားပါတယ် . ပုံစံလေး ကတော့ ချစ်စရာလေး ဖြစ်သွားတယ် . ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခြား downloader တွေထက် orbit downloader ကိုပဲ သဘောကျတယ် . အခုအချိန်အထိလဲ သုံးနေတုန်းပါပဲ . orbit downloader သုံးသူများ မသိဖြစ်နေမှာစိုးလို့ သတိပေး လိုက်တာပါ .သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး version ကို ဒီမှာ သွားပြီး Download လုပ်ယူလို့ ရပါတယ် .
ကဲ ဒီ brush လေးကိုကော မကြိုက်ကြဘူးလား . ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ . Download ifile.it ၊ Download mediafire
window သုံးဖူးတဲ့သူတိုင်း အခုပုံမှပြထားတဲ့ error မျိုးကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ . ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာ စပြီးသင်စတုန်းကဆိုရင် အတော်လေးကို ဦးနှောက်စားခဲ့ရတာပေါ့ .. အခု ကျွန်တော့်ဆိုက်ကို တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်ဆရာ ၀င်ကြည့်ပါတယ် . သူ့ ခမျာလဲ တပည့်တစ်ယောက်ကို ပညာကုန် သင်ပေးလိုက်မိလို့ . တပည့်က ဆိုင်ခွဲထွက်ပြီး . သူနဲ့အပြိုင်ကြဲကတည်းက တပည့်တွေကို အတော်လန့်သွားပုံပေါ်တယ် . ကျွန်တော်ကတော့ ခေတ်ပျက်မှ သူ့ဆီရောက်သွားတာပါ . ကျွန်တော့်ကို သူမေးပါတယ် . လတဲ့လစာက ခြောက်သောင်းထဲပါ . မပို့မပို့လစာလေးနဲ့ပေါ့ . စလုပ်ကတည်းက လစာကို မျှော်လင့်ပြီး လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့ အတွက် နောင်တတော့ မရပါဘူး . ရတဲ့နောင်တကတော့ သူ ကွန်ပျူတာတွေကို service ပြင်မယ်ဆိုတိုင်း printer တွေကို service ပြင်မယ်ဆိုတိုင်း၊ မိတ္တူကူးစက်တွေကို service ပြင်မယ်ဆိုတိုင်း ကျွန်တော့်ရှိနေတုန်းဆို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်တတ်ပါတယ်။ လုပ်မပြပါဘူး . ကျွန်တော် လဖက်ရည်သွားသောက်တာမျိုး အိမ်ပြန်ပြီဆိုတာနဲ့ ညအချိန်ကျမှ ကုပ်ကပ်ပြီးလုပ်တာပါ။ စစလုပ်တုန်းကတော့ ပြတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကို အဲ့လောက် သူလုပ်တာမြင်တာလေးနဲ့ လုပ်တတ်မယ်လို့ မထင်တာလဲပါတာပေါ့။ ဒီက သိတယ်မဟုတ်လား ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မူလီပါ အပေါက် ဘယ်နှစ်ပေါက်ပါလဲ လိုက်ကြည့်နေတဲ့ကောင်။ သူလုပ်တာမှန်သမျှကို ကျွန်တော်ရသွားပါတယ် . ကျွန်တော်ကလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက အကျင့်ရှိတယ် . တစ်ခါလေး မျက်စိနဲ့မြင်တာနဲ့ အိမ်ရောက်ရင်ပြန်လုပ် အဆင်ကိုပြေလို့ မပြေလို့ကတော့ မိုးလင်းလဲ ဂရုမစိုက်ဘူး။ အခု ဒီ Unlocker လေးကြောင့် တစ်ညလုံး မအိပ်ခဲ့ရပုံလေးကို ပြန်မြင်ပြီး ပြောပြလိုက်တာပါ ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက အနားမှာလဲ မေးမြန်းမယ့်သူက မရှိဗျာ . သင်တန်းမှာကလဲ ဒါတွေကို မသင်ပေးဘူး . လေနံဓါးထစ်ပဲ သင်တန်းဆရာတွေက စေတနာပါပါနဲ့ မေးသမျှကို ဖြေပေးမယ့် ဆရာမျိုးတော့ ကျွန်တော့်မတွေ့သေးဘူး . မဆုံမိတာလဲပါမှာပါ . ဆရာက ကျွန်တော့သာ သင်မပေးချင်တာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူလုပ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ် . သူက ကွန်ပျူတာကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အဲ့ကောင်လေးကျတော့ သင်ပေးတယ်ဗျာ ။ တစ်ခါတစ်ခါ စဉ်းစားမိတယ် လူတွေများ လိုချင်တဲ့သူကိုမပေးဘဲ ဟင့်အင်းလို့ ခေါင်းခါနေတဲ့သူကိုမှ အတင်းလည်ပင်းညှစ်ပြီး ယူရင်ယူမရင်ရင် နာမယ်လုပ်တာမျိုးလဲ ရှိတာဘဲလို့၊ ဒီစာမျိုးကို အပြင်မှာ ကျွန်တော် ပြေဖို့ ပါးစပ်ကထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး . ကြုံတုန်းလေး ဘယ်တုန်းကမှ မပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေးကို သိအောင်လို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တာပါ . ဆရာလဲ နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် . ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဆရာဟာဆရာပါပဲ ...ကဲဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖိုင်တွေကို delete (or) shif + delete + enter ဘယ်လိုမှ ဖျက်လို့မရဘဲ အပေါ်က error မျိုးဘဲ တက်နေတယ် . ဖိုင်ကလဲ တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Unlocker လေးနဲ့သာ ဖျက်လိုက်ပါ . ကျွန်တော် အရင်က ဒီပို့စ်မှာ ရေးပေးထားခဲ့ပြီးသားပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire Read More
The Most Powerful Guitar Chord Dictionary in the W...
USB STORAGE DEVICE ခေါ် flash drive များကို ဘယ်လိုပ...
ကဲ ဒီနေ့တော့ link အသစ်ကလေးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် . ...
Desinger တိုင်း လိုချင်ကြတဲ့ Vector Stars and Bubb...
ဒါကတော့ အခုနောက်ပိုင်း လူသုံးများလာတဲ့ ဖိုင်ခွဲတဲ့...
ပေးထားတဲ့ DL link တွေကို ဘယ်လို Download လုပ်ယူမလဲ...
စက်ထဲက program တွေကို တစ်ခြားသူ သုံးမရအောင် passwo...
Windows 2000, XP and Vista အတွက် Driver ပေါင်း 75,...
Circle flower Brush